Nuummite, laga bilaabo Greenland. amphibole minerals gedrite iyo anthophyllite. Video
Nuummite, laga bilaabo Greenland
Nuummite waa dhagax metamorphic naadir ah kaas oo ka kooban minerals oo ah amfibole gedrite iyo anthophyllite. Waxaa lagu magacaabaa aagga Nuuk ee Greenland, halkaasoo laga helay.
Nuummite badiyaa waa midab madow iyo midab. Waxay ka kooban tahay labo amfibiin, gedrite iyo anthophyllite, taas oo ka dhigaysa lamelaha lafdhabar u ah oo dhagaxa dhagaxda u ah. Macdanta kale ee caadiga ah ee dhagaxa ah waa pyrite, pyrrhotite iyo chalcopyrite, taas oo ka samaysan kooxo jilicsan oo jajab ah oo ku jira shey caleenta leh.
In Greenland dhagaxa waxaa loo sameeyay laba metamorphic oo isku xiga oo dhagax weyn oo dhagax ah. Jabhadu waxa ay ka dhacdey Archeine ku dhawaad ​​2800 million sano ka hor, maadada 'metamorphic' ayaa lagu qoray taariikhda 2700 iyo 2500 million sano ka hor.
Rock ayaa markii ugu horeysay laga helay 1810 ee Greenland by KLG Giesecke. Waxaa lagu qeexay cilmi ahaan OB Bøggild inta u dhexeysa 1905 iyo 1924. True Nuummite waxaa laga helaa Greenland. Sababtoo ah dabeecadeeda maqan, dhagax dhif ah waxaa laga doonayaa dhagaystayaasha dhagaxyada, kuwa wax soo iibsada iyo kuwa xiiseynaya eeloteric. Waxaa badanaa la iibiyaa marka la dhammeeyo.
Kala duwanaanta Macdanta
Foomamka: (Mg2) (Mg5) Si8 O22 (OH) 2
Mucaaradka: 780.82 gm
Midabka: Madow, cawl
Isku-dubarid: Ma jiro
Xoqitaanka: Ku quruxda 210
Mohs kobcinta adagaanta: 5.5 - 6.0
Luqad: Vitreous / glossy
Mugga: 2.85 - 3.57
Heerka xasaasiga ah: 1.598 - 1.697 Biaxial
Waxyaabaha lagu magacaabo: 0.0170 - 0.230
Nuummite waxay isticmaashaa tamarta biyaha, tamarta joogtada ah, awoodda aamusnaanta, iyo nadiifinta. Waxay ku muujinaysaa awoodaha aan la helin. Waa wax-soo-saarka, aan dhammaystirnayn, haddana awood leh. Qaybta Biyaha waxay keenaysaa awoodda dib-u-dhalashada iyo dib-u-dhalashada. Waa tamarta wareegga nolosha. Isticmaal kareemooyinka turquoise si aad u wanaajiso meel kasta oo aad isticmaasho si aad u soo celiso, cabsigelin deg deg ah, ama salaadda. Tamarta biyaha waxaa caadi ahaan la xidhiidha aagga waqooyiga ee guriga ama qolka. Waxay la xiriirtaa aagga Xirfadda iyo Nolol-maalmeedka, tamarteeda tamarta ah ee hubisa in la dheellitiray tamarta marka noloshaadu socoto oo socoto.